Ukusabalalisa kuvela enzalweni kodwa i-thyme nayo ingasakazwa ngokutshala ama-cuttings noma ukuhlukanisa isitshalo esimisiwe nokutshala lokhu.
Ukuhluma okukhulu kakhulu endaweni yesitshalo kwenziwa ngabakhiqizi bezinsimbi. Ukutshala ngabalimi abakhulu bezentengiselwano kuvame ukwenza ngokutshala izithombo ze-thyme eziye zakhiwa endaweni yokushisa.
Lokhu kunikeza umlimi ukulawula ngaphezulu kwesitshalo semvelo kanye nokufana. Izitshalo ze-thyme zitshalwe zibe izitshalo ezinamanzi angama-6 mm ejulile. Lapho imbewu ihlume futhi izithombo ezinamandla sezikhulile, lezi zihlwanyelwe ensimini.
Izitshalo ze-Thyme kufanele zihlukaniswe ngamasentimitha angu-20 emigqeni engama-50 cm. Lokhu kuyimithi yezitshalo ezingamaphesenti angu-80 000 ehekthaleni ngalinye. Ukusebenzisa kanye namathrekhi amathrekhi ashiyelwe imikhuba yokuphatha nokuvuna.
Ukuhlwanyela ngokuqondile kwe-thyme kwenziwa ensimini ekwindla. ENingizimu Afrika, lokhu kuzoba sekupheleni kukaMashi noma ekuqaleni kuka-Ephreli futhi kuqinisekiswe ukuthi izithombo zikhula ngaphambi kokubusika nokuthi entwasahlobo ziqinile futhi zisekelwe kahle.
Hlwanyela imbewu ematayini embewu endaweni evikelekile noma ukushisa okushisa ngoJuni kanti ngasekuqaleni kwentwasahlobo izithombo ze-thyme kufanele zibe namandla ngokwanele ukutshala emasimini. Izithombo ngokuvamile ziqinile ngokwanele ukutshala amasonto ayisishiyagalombili emva kokutshala imbewu.
Tshala izithombo zakho ze-thyme ekuqaleni kwentwasahlobo. ENingizimu Afrika itshale izithombo ngasekupheleni kuka-Agasti kuya ekuqaleni kukaSepthemba ngemuva kweqhwa lokugcina.
Amasonto ayisishiyagalombili ku-greenhouse kufanele akhiqize izithombo ze-thyme ezinamandla ezilungele ukutshala emasimini. Ukukhiqizwa kwe-thyme entsha, abakhiqizi abathile baqala ukuvuna amathiphu okukhula okusha kusukela emavikini angu-12 kusukela ekutshalweni. Emva kwalokho isivuno sesibili singenziwa ngaphambi kwekwindla.
Unyaka wesibili wokuvunwa uzoletha izicucu ezingaphezulu. Izitshalo ze-Thyme zingavunwa iminyaka emine kuya kwemihlanu uma ziphathwa kahle. Izitshalo ze-Thyme ziba nzima kakhulu futhi zikhukhuma njengoba zikhula ngakho kuhle ukushintshwa izitshalo njalo eminyakeni emine kuya kwemihlanu.
I-Thyme ayidingi imanyolo eminingi. Ngaphambi kokutshala, isampula yomhlabathi esimele kufanele ithathwe futhi ithunyelwe ukuze ihlaziywe. Lokhu kuzoveza uhlobo lomhlabathi kanye nezidingo zomsoco ezitshalweni ezihlosiwe.
Ukuze uthole umhlahlandlela onzima, lesi sincomo esilandelayo singasetshenziswa uma kungekho ukuhlaziywa kwenhlabathi. Isicelo sokuqala esingu-250 kg se-3:1:5 singasakazwa futhi sifakwe enhlabathini engaphezulu kuka-20 cm ngaphambi kokutshala izithombo. Lokhu kuzokwenza izithombo ezintsha ze-thyme zibe isiqalo esihle ekuzinzeni ngokwazo. Phakathi nezinyanga ezingu-12 zokuqala, kubalulekile ukugcina izitshalo zikhula ngakho-ke ezinye izicelo ezimbili ze-200 kg we-3:1:5 zingasetshenziswa emigqeni yezitshalo, eyodwa ngoDisemba kanti enye ngoMashi. Kunconywa ukutshala emva kokunqunywa kokuvuna.
I-thyme isitshalo isitshalo esiqinile futhi asidingi amanzi amaningi. Uma itshalwe ngaphandle kokunisela okuhlala unomphela, imvula engaba ngu-500 mm ngaphezu konyaka kufanele ibe yanele. Ukufaka ukuchelela unomphela kungakhathaliseki ukuthi ukwandisa isivuno. Ukunisela noma ukuchelela ukuchelela kufanelekile kepha ungapheli kakhulu ngoba lokhu kubangelwa izifo ezimpande futhi kunciphise amandla amafutha abalulekile esitshalweni.
Kuye ngezinhlobo zenhlabathi nesimo sezulu, imiqulu yokunisela iyohluka kusuka ensimini kuya ensimini. Inani elihle liphakathi kuka-20 no-25 mm ngeviki phakathi nezinyanga zasehlobo zasehlobo futhi ziyancipha phakathi nezinyanga ezipholile noma ezinamanzi zonyaka. Unganisela isonto ngaphambi kokuvuna, kodwa ukuchelela ngokushesha emva kokuvuna ukubuyisela inhlabathi emanzini amathumba okunciphisa ukucindezeleka.
Kunconywa ukufaka amadivaysi okuqapha umswakama ngokuqhubekayo ukuqapha inhlabathi.